Abstruct na-enye gị ọmarịcha akwụkwọ ahụ aja na OnePlus na 4K | Gam akporosis
Abstruct bụ ngwa ọhụrụ maka akwụkwọ ahụ aja 4K kere onye omenkà ama ama na OnePlus obodo maka ndi ahu na akwụkwọ ahụ aja. Karịsịa maka inye aka gị na ụfọdụ akwụkwọ ahụ aja nke agba agba doro anya na ọtụtụ nkọwa.
Abstruct bụ ngwa na-enye anyị ohere nweta naanị ya 300 na akwụkwọ ahụ aja. Ya mere ọ bụrụ na ị hapụrụ gị na ọchịchọ ibudata na akwụkwọ ahụ aja nke Hampus Olsson, na ndị ọrụ OnePlus, a na ngwa bụ fọrọ nke nta ka a ga-ọ arụnyere na mkpanaka gị; karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-orednọ nkịtị gwụrụ na-emebu na mkpa a mgbanwe na desktọọpụ nke mkpanaka gị na ngwaọrụ.
1 Nwee akwụkwọ ahụaja OnePlus na ekwentị gị
2 Ngwa ejikere nke ọma
Nwee akwụkwọ ahụaja OnePlus na ekwentị gị
N'ime ụfọdụ atụmatụ kacha mma nke Abstruct bụ na anyị nwere ike ibudata na akwụkwọ ahụ aja na 4K mkpebi Nkọwa OnePlus. Anyị na-ekwukwa banyere ihe ị nwere ike ịnweta site na eziokwu maka OnePlus 2 ruo na nke ọhụrụ emere maka OnePLus 7. Site n'ụzọ, enwere ike ịnweta nke ikpeazụ mgbe ekwuputara ọkwa OnePlus 7, yabụ ị ga-eso n'etiti ndị mbụ nwere ha ka mobile na-agagharị agagharị na ya kacha mma.
Ọ bụghị naanị na Hampus Olsson raara onwe ya nye ịrụ ọrụ maka OnePlus, kamakwa maka Paranoia gam akporo, Gam akporo ROM ndị obodo ahụ hụrụ ọtụtụ ndị n'anya afọ ole na ole gara aga. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu okwu banyere nwoke bụ ọkachamara n'ọgụ nke itinye akwụkwọ ahụaja na desktọọpụ nke ụdị dị iche iche nke agba ha doro anya mara, maka ịbụ ndị a na-adịghị ahụ anya na inwe ụfọdụ ụdị mbụ iji wee mata onwe anyị. Ndị ọzọ nke mobiles. n'aka ndị ọrụ ibe anyị.
Anyị na-ekwu maka ngwa akpọrọ Abstruct na nwere ma ya free akụkụ na ya adịchaghị akụkụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta katalọgụ dum nke akwụkwọ ahụaja 300 anyị ga-agafe igbe ahụ. Ọ bụkwa ụzọ iji kwụghachi ụgwọ ọrụ nke onye nrụpụta a. Maka € 1,99 ị ga-enwe akwụkwọ ahụaja pụrụ iche na 4K maka mkpanaka gị.
Ngwa ejikere nke ọma
Ihe ọzọ enwere ekele maka Abstruct bụ na anyị anaghị eche ihu ihu ngwa nwere nnukwu akwụkwọ ahụaja, mana nke ahụ interface na ọrụ ahụ na UI ọ dị mma. Anyị nwere ike ichefu banyere otu ụzọ na-agagharị agagharị iji nwee otu ihuenyo nke anyị ga-agagharị dabere na swipes site na edemede niile dị na Abstruct.
Otu dị ka "Fusion", "OnePlus", "Paranoid" na "Nka", nakwa na ha nweere onwe ha kpamkpam, ọbụnadị ndị akwụ ụgwọ dị ka "Topology", "Vibrant", "Void" na "Poly". All a seasoned na mgbanwe nke agba nke ndabere nke ngwa oge ọ bụla anyị na-aga a dị iche iche Atiya.
Ọ bụrụ na anyị tinye otu anyị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ahụ aja zuru ezu na a usoro nke thumbnails gbanwere na nha ihuenyo iji mepụta ezigbo ahụmịhe onye ọrụ. Obere ihe karịa ihe Abstruct na-enye anyị. Igodo nke dị n'akụkụ aka nri dị elu iji gosi anyị bọtịnụ ndị ọzọ ịkekọrịta ngwa ahụ, soro onye na-ese ihe na Instagram ma ọ bụ hapụ nyocha na Google Play iji gosi ndị ọzọ na anyị na-emeso ngwa akwụkwọ ahụaja dị elu yana ọ ga-abụrịrị n'ezie bụrụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe OnePlusI kwesịrị ịma na i nwere ngụkọta nke 56 4K na akwụkwọ ahụ aja njikere ga-eji na na gị mobile akwụkwọ ahụaja. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọ bụla n’ime ha kwesịrị ịdị arọ ya na ọlaedo maka imepụta ya.
Ọbịbịa dum nke a ngwa a na-akpọ Abstruct na site na mgbe izizi na-enye akwụkwọ ahụ aja na 4K ka ị ghara ịhapụ ụfọdụ n'ime coolest. Oh, na dịka anyị kwuru, ọ ga-abụ ụbọchị ole tupu anyị enweta ndị nke ọhụrụ OnePlus 7. Ohere di uku nye ndi nwere ekwentị OnePlus na nke ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nweta ọmarịcha akwụkwọ ahụ aja na OnePlus 7 na 4K na Abstruct
Xiaomi Mi 9 VS Huawei P30, ihuenyo kpọghee duel, (ihu na mkpisiaka) Whonye ka ị chere ga-emeri n'agha ahụ?
Igwe okwu ekwe ntị ekwe ekwe na OnePlus Bullet 2 ruru elekere 10 na nkeji 10 nke ụgwọ